“अब म लुक्न चाहन्नँ,” : सल्मान रुस्दी, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
“अब म लुक्न चाहन्नँ,” : सल्मान रुस्दी
पेरिस,। इरानी सर्वोच्च धार्मिक नेता आयातोल्लाह रुहोल्लाह खोमेनीले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएपछि झण्डै तीन दशकदेखि अर्ध भूमिगत रहनुभएका प्रसिद्ध साहित्यकार सल्मान रुस्दी बिस्तारै विद्रोही देखिन थालेका छन् ।
रुस्दीले सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ देखि नक्कली नाम राख्न छाडेका थिए । तेहरानले रुस्दीमाथिको चेतावनी फिर्ता लिएको तीन वर्षपछि उनले नक्कली नाम राख्न छाडेका हुन्।
यसअघि, पूर्वी फ्रान्समा आयोजित एक पुस्तक प्रदर्शनीमा सर्वसाधारण श्रोताकै रुपमा उनि सहभागी भएका थिए, तर न्यूयोर्कमा भने उनि विल्कुलै सामान्य जीवनमा रहने गर्छन् । न्यूयोर्कमा उनि झण्डै दुई दशक बसे । “म भूमिगत बाटो (सब वे) बाटै यात्रा गर्दछु,” उनले भने ।
“दी सटानिक भर्सेज” रुस्दीको पाँचौं पुस्तक हो । अहिले उनको १८औं पुस्तक आइसकेको छ । भर्खरौं उहाँको “दी गोल्डेन हाउस” प्रकाशन भएको छ जुन भारतको मुम्बईका एक व्यक्तिको बारेमा छ ।
रुस्दी आफैँ पनि दार्शनिक हुन् । यस्तो पुस्तक लेखेकामा पश्चाताप लागेको छैन भनी सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, “मलाई कुनै पछुतो छैन ।” रासस/एएफपी